DemandJump: Marketing mialoha sy fahiratan-tsaina mifaninana | Martech Zone
Alahady, Martsa 6, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Ny Internet dia loharanom-pahalalana mahavariana izay, raha trandrahana, dia afaka mamokatra fahalalana be dia be. Saingy araka ny fanadihadiana CMO tamin'ity taona ity, ny ampahatelon'ny mpivarotra ihany no mahavita porofoy ny vokany amin'ny vola laniny amin'ny marketing dia ny antsasany ihany no afaka mahazo fananana fahatsapana ny vokany, ary efa ho 20% no mahavita mandrefy izay fiatraikany na inona na inona. Tsy mahagaga raha ny marketing Analytics ny fandaniana dia antenaina hampiakatra 66% ao anatin'ny telo taona.
Rehefa mifindra monina an-tserasera ny isan-jaton'ny fividianana ny mpanjifa sy ny orinasa amin'ny ankapobeny dia miaiky ny mpivarotra fa mila mahazo hafatra eo imason'ny mpihaino mifandraika amin'izany toerana misy azy ireo izany. Ny varotra atiny, ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy ary ny marketing marketing influencer dia mitohy mitombo satria ny làlan'ny marketing hafa dia mahavoky.
DemandJump dia fandrosoana goavana amin'ny faharanitan-tsaina amin'ny varotra mialoha, ahafahan'ny mpivarotra mahita ny fotoana mety amin'ny marketing, manara-maso ny hetsiky ny mpifaninana ary manafaingana ny fifamoivoizana sy ny fiovanao. Ny fijerena haingana ny dashboard -n'izy ireo dia manome anao topy maso ny topy maso momba ny referral sy ny fotoana mety anananao, ao anatin'izany ny fitarihana, ny vaovao sy ny PR, ny eCommerce, ny tombotsoan'ny Affiliate, ny bilaogy ary ny votoatin'ny atiny, sns.
Votoatiny Marketing Intelligence
Amin'ny fampiasana ireo fitaovam-pitsikilovana ny votoatin'ny DemandJump, azonao atao ny manara-maso ny atiny rehetra ateraky ny mpifaninana aminao, ny fahombiazany, ary koa ny mamantatra ireo loharanon'ny fivezivezena referral amin'ny atiny.
Ity dia afaka manampy anao hamantatra ireo mpanafika sy tranokala manondro tranokala izay hitarika ny fifamoivoizanao koa. Ny sehatra aza dia manome fitaovana fitantanana fifandraisana ho anao hitandrina sy hanaraka ny fifandraisana manan-danja amin'ireo olona mitaona anao.
Ny saosy miafina ao aoriana DemandJump dia fanangonana hevi-dehibe mifaninana mifaninana azonao zahana amin'ny sehatra hitarika ny atiny sy ny paikadim-pampandrosoana. Alao an-tsaina hoe manana fandaniana sarotra amin'ny marketing amin'ny tambajotra doka maro ianao, mampiseho tamba-jotra doka, mpanohana ary fantsona hafa. DemandJump dia afaka manampy anao hamantatra izay loharano mitarika fifamoivoizana sy fifamatorana, fa tsy ny tambajotra doka ataon'izy ireo fotsiny. Izy ireo aza dia manome ny algorithm manokana fananan'izy ireo manokana mba hanaovana laharam-pahamehana ireo fotoana mety hisy vokany lehibe indrindra.
Ny fahafantarana ny valin'ny marketing izay ampiasain'ny mpifaninana aminao amin'ny paikadiny dia afaka manampy anao hahatakatra ireo sehatra ilainao hifaninana.
miaraka DemandJump, mpivarotra an-tserasera amin'ny karazan'orinasa rehetra - manomboka amin'ny e-varotra, famoahana boky, orinasa na orinasa tsy mitady tombombarotra dia afaka mahazo fomba fijery sarobidy momba ny paikadim-barotra marketing misy fantsona marobe. Jereo hoe aiza ianao no manohitra an'ireo mpifaninana aminao ary inona ny hetsika tokony hataonao mba hitomboany.
Miaina ny fangatahana fangatahana amin'ny asa!
Fampahafantarana: Niara-niasa akaiky tamin'ny mpanorina an'i Shawn Schwegman aho nandritra ny taona maro, nampihatra ny vahaolana ho an'ny ezaka ataontsika izahay, ary mamorona fiaraha-miasa mitohy miaraka amin'ny DemandJump.
Tags: fitsikilovana tambajotra dokaAffiliate-barotrafaharanitan-tsaina amin'ny fifaninananaContent Marketingmitsambikinademandjumpfaharanitan-tsaina marketing dizitalye-varotraecommercemahita ny influencersny fomba hahitana influencerhery miasa manginasehatra influencertaratrafmfaharanitan-tsaina amin'ny marketingreferrals vaovaovinavina Analyticsfaharanitan-tsaina mialohavarotra mialohafifandraisana amin'ny besinimarofampitana fifamoivoizana